Mandehandeha ary tia miaina rivotra madio? Izay tsy aleha
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahrain » Mandehandeha ary tia miaina rivotra madio? Izay tsy aleha
Aprily 20, 2017
Ny faritra Golfa no mety ho lohalaharana amin'ny fitsangatsanganana lafo vidy sy fizahan-tany, saingy manana kalitaon'ny rivotra ratsy indrindra eto an-tany. Ao anatin'ny fanentanana ho an'ny andro eto an-tany ho an'ny tanàna maitso, Eco2Greetings dia maniry ny hananan'izao tontolo izao fomba tahaka ny fidirana amin'ny revolisiona amin'ny masoandro, ny fisafidianana ireo tranobe maitso mifantoka amin'ny angovo azo havaozina, ary ny fanapahana hevitra amin'ny fomba fitaterana hafa toy ny bisikileta na ny bus mankany manampy amin'ny fampihenana ny fandefasana entona manimba.
Ny tanàna misy poizina dia olan'ny olombelona matetika. Ny loharano tokana lehibe indrindra an'ny mpandoto rivotra dia ny fandorana lasantsy fosil toy ny arina sy lasantsy. Ny lasantsy fosily dia ampiasaina hampafanaina, hampandehanana fiara fitaterana, hiteraka herinaratra, ary ho an'ny fanodinana sy ny fizotran'ny indostrialy. Ny fandoroana ireo solika ireo dia miteraka setroka setroka, orana asidra ary entona entona.
Ireo firenena manankarena solika afovoany Atsinanana dia manjaka amin'ny toerana folo ambony amin'ny lisitr'ireo tanàna maloto indrindra. Ny tanàna toy izany dia ao:
Arabia Saodita, ambaratongam-bokin'ny 108.
Qatar, haavon'ny sombin-javatra 103.
Egypt, haavon'ny sombin-javatra 93.
Bangladesh, haavon'ny sombin-javatra 84.
Koety, haavo sombiny 75.
Kamerona, haavo singa 65.
Ny haavon'ny sombin-javatra Mauritania 65.
Nepal, ambaratonga singa 64.
Emira Arabo Mitambatra, haavo singa 64.
India, haavon'ny zana-kazo 62.
Libya, haavo sombin'ny 61.
Bahrain, haavon'ny zana-kazo 60.
Pakistan, haavon'ny zana-kazo 60.
Nizera, haavon'ny zana-kazo 59.
Oganda, haavon'ny zana-kazo 57.
Sina, haavon'ny zana-kazo 54.
Myanmar, haavo sombiny 51.
Iràka, haavon'ny zana-kazo 50.
Bhutan, haavo singa 48.
Oman, haavon'ny zana-kazo 48.
Ny Fanjakana Mitambatra dia laharana faha-159 amin'ny lisitra miaraka amin'ny ambaratonga sombiny 12. Nahazo ny laharana faha-173 i Etazonia, miaraka amin'ny ambaratonga ambany ambany 8.
The sarintany interactif mampiseho ihany koa fa ireo firenena toa an'i Shina, izay malaza ratsy amin'ny tsy fisian'ny rivotra madio ao anatin'ny tanànany, dia nandoto ny haavon'ny rivotra izay SATRIN'NY haben'ny Saudi Arabia. Sina dia nahavita ambaratonga 54 raha oharina amin'ny sombin-javatra mampatahotra an'ny Arabia Saodita tamin'ny 108. I Saudi Arabia no meloka indrindra amin'ireo tsatokajin'ny tanàna maloto indrindra.
Ny mety hitrangan'ny aretim-po, ny homamiadana ary ny tapaka lalan-dra dia mihombo any amin'ireo faritra be fandotoana ary manaporofo ny tahan'ny fahafatesan'ny zaza ao amin'ny firenena izay betsaka ny fahalotoan'ny rivotra. Araka ny World Health Organization (WHO), ny fandotoana ny rivotra dia atahorana kokoa amin'ny fahasalamana noho ny Ebola na VIH ary ny 80% amin'ireo faritra an-tanàn-dehibe rehetra dia manana haavon'ny fahalotoan'ny rivotra ambonin'ny hat ka heverina ho mahasalama.
Tsy ny faharavana sy ny haizina rehetra, ny sasany amin'ireo rivotra madio indrindra eto an-tany dia an'i Nouvelle Zélande, ny Nosy Solomon, Kiribati ary Brunei Darussalam, izay samy mirehareha amin'ny sombin-javatra bitika 5.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo tanàn-dehibe misy poizina manerantany, azonao atao ny mitsidika: www.afiatransia.com.
Faritra efatra andro tsy misy fiaramanidina napetraka eo afovoan'i Cologne
Fisondrotana 138 isan-jato amin'ny alina hotely: zava-misy any Moyen Orient
Vaovao momba ny dia any Espana
Ny fizahan-tany vahiny any Espana amin'ny volana martsa 2021 dia nidina 75.5% vs martsa 2020
Fraport hiheverana ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny fisavana fiarovana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt manomboka amin'ny 2023
Fijerena Chipuel effuel: fitaovana nohavaozina Fitaovana Euel OBD2 mpamonjy lasantsy